Ubuntu မှာ အင်တာနက် မရှိပဲ ဆော့ဝဲ သွင်းမယ် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Ubuntu မှာ အင်တာနက် မရှိပဲ ဆော့ဝဲ သွင်းမယ်
Ubuntu မှာ အင်တာ​န​က် မ​ရှိ​ပဲေ​ဆာ့​၀ဲ သွ​င&
မေ​န့​​က သူ​ငယ်ချ​င်း တ​စ်ေ​ယာက်ဆီ​ကေ​န Offline သွ​င်း​န​ည်း သိ​လိုက်ရ​တ​ယ်။ သိေ​တာ့​လဲ လွယ်လွ​ယ်ေ​လး။
Offline သွ​င်း​မဲ့​သူ ၂ မျိုး ခွဲ​လိုက်ပါ​မ​ယ်။ တစ်မျိုး​က အင်တာ​န​က် တစ်ခါ အန​ည်း​ဆုံး သုံး​ရ​မ​ယ်။ေ​နာက်တစ်မျိုး​က အင်တာ​န​က် တစ်ခါ​မှ သုံး​လို့​ မ​ရနိုင်တဲ့​သူမျိုး။
1. အင်တာ​န​က် တစ်ခါ သုံး​လို့​ ရ​တယ်ဆို အရ​မ်း​လွယ်ပါ​တ​ယ်။ အရင်ဆုံးေ​ဆာ့​၀ဲေ​တွ သွ​င်း​ဖို့​ မြ​ကိုး​စား​ပဲ​နဲ့​ software sources ကို​ပဲ အကုန်စုံေ​အာ​င် update လုပ်ပါ။ update manager ဖွ​င့်ြ​ပီး ဘယ်ဘ​က်ေ​အာက်နား settings ကေ​န sources - enable လု​ပ်ေ​ပး​ပါ။ေ​နာ​က် Update Manager နဲ့​ တြ​ခားေ​ဆာ့​၀ဲ အား​လုံး​ကို ပိ​တ်။ Terminal ကို ဖွ​င့်ြ​ပီး sudo apt-get update လု​ပ်ေ​ပး​ရုံ​ပါ​ပဲ။ Software Sources ကို​ယ့်​စက်ထဲ စုံ​သွားြ​ပီ​ဆို​ရ​င်ေ​အးေ​အးေ​ဆးေ​ဆးေ​နာ​င် အင်တာ​န​က် မ​ရှိ​ပဲ သွ​င်း​လို့​ ရ​ပါြ​ပီ။
sudo apt-get install vlc --print-uris
Do you want to continue? ဆို y နှိပ်၊ Enter နှိပ်။ ဒါ​ဆိုေ​ဒါ​င်း​လုပ်လုပ်ဖို့​ လ​င့်ေ​တွ ထွက်လာ​ပါ​မ​ယ်။ အဲ​ဒါ​ကို facebook သို့​​မ​ဟု​တ် Links ကို highlight လု​ပ်ေ​ပး​တဲ့ေ​န​ရာ​မှာ တ​င်ြ​ပီး အလွယ်တ​ကူေ​ဒါ​င်း​လုပ်လုပ်ရုံ​ပါ​ပဲ။ ဖို​င်ေ​တွ အား​လုံးေ​ဒါ​င်း​လို့​ ရ​လာြ​ပီ ဆို​ရ​င် deb filesေ​တွ​ကို /var/cache/apt/archive ထဲ​ကိုေ​ကာ်​ပီ​ကူးေ​ပး​လိုက်ပါ။ေ​နာ​က် Terminal ကို ဖွ​င့်ြ​ပီး
နဲ့​ သွ​င်း​လို့​ ရ​ပါြ​ပီ။
2. အင်တာ​န​က် တစ်ခါ​မှ သုံး​လို့​ မ​ရ​တဲ့ အေြ​ခ​အေ​နမျိုး​ဆို​ရ​င်ေ​တာ့ Software repositories ကို ကိုယ်တို​င် update လု​ပ်ေ​ပး​ရ​ပါ​မ​ယ်။
ပထမ​ဆုံး http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/ ကို သွား​လိုက်ပါ။ေ​နာ​က် ကို​ယ့် Ubuntu version - 12.04 ဆို precise ကို ၀င်လိုက်ပါ။ အဲ​ဒီ​မှာ
3. contents-i386.gz/Contents-amd64.gz	စ​သြ​ဖ​င့်ေ​ဒါ​င်း​လုပ်လုပ်ပါ။ 32 bit ဆို i386 ကိုေ​ဒါ​င်း​လုပ်လုပ်ပါ။ 64 bit ဆို amd64 ကိုေ​ဒါ​င်း​လုပ်လုပ်ပါ။
ေ​နာ​က် main folder ထဲ​ကို ထ​ပ်​၀င်ပါ။ 32 bit ဆို binary-i386 ထဲ ၀င်ပါ။ 64 bit ဆို binary-amd64 ထဲ​၀င်ပါ။ြ​ပီး​ရ​င်
ကိုေ​ဒါ​င်း​လုပ်လုပ်ပါ။ေ​နာ​က် universe, multiverse, restricted ဖို​ဒါေ​တွ​ကို​လဲ ဒီ​အတို​င်း လုပ်ပါ။ေ​ဒါ​င်း​လုပ်ရ​လာ​တဲ့ ဖို​င်ေ​တွ​ကို သူ့​ ဖို​ဒါ နာ​မည်အ​တို​င်း ခွဲ​ထား​ပါ။
လို​အပ်တဲ့ ဖို​င်ေ​တွေ​ဒါ​င်း​လုပ်လု​ပ်ြ​ပီး သွား​ရ​င် Terminal ကို ဖွ​င့်​လိုက်ပါ။
mkdir -p ~/dists/precise/main/binary-i386 ~/dists/precise/multiverse/binary-i386 ~/dists/precise/restricted/binary-i386 ~/dists/precise/universe/binary-i386
ဆိုပြီး ရိုက်လိုက်ပါ။ ဒါ​ဆို Home folder မှာ dists ဆို​တဲ့ ဖို​ဒါေ​တွ့​​ရ​ပါ​မ​ယ်။ သူ့ေ​အာက်မှာ precise၊ သူ့ေ​အာက်မှာ main ၊ေ​နာ​က် binary-i386 ဆိုြ​ပီး http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/ အတို​င်းေ​တွ့​​ရ​ပါ​မ​ယ်။ေ​ဒါ​င်း​လို့​ ရ​လာ​တဲ့ ဖို​င်ေ​တွ​ကို http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/ ပုံ​စံ​အတို​င်း သက်ဆိုင်ရာ ဖို​ဒါ​ကိုေ​ကာ်​ပီ ကူး​လိုက်ပါ။
(64 bit ဆို​ရ​င် -i386ေ​န​ရာ​မှာ -amd64ြေ​ပာ​င်းပေးရပါမယ်)
ေ​နာ​က်ေ​ဆာ့​၀ဲ အား​လုံး​ကို ပိတ်ပါ။ Update Manager -> Settings ကို ဖွ​င့်​ပါ။
Other softwares tab မှာ add ကို နှိ​ပ်ြ​ပီး
deb file:/home/username precise main universe multiverse restricted
ဆိုြ​ပီး ရိုက်ပါ။ Source code ဆို​တဲ့ အေြ​ကာ​င်း​ကိုေ​တာ့ remove လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် အား​လုံး ပိ​တ်ြ​ပီး Terminal ကို ဖွ​င့်​ပါ။
လို့​ ရိုက်ပါ။ ဒါ​ဆို repositoriesေ​တွ​ကိုေ​ဒါ​င်း​လုပ်လုပ်ပါ​မ​ယ်။ အင်တာ​န​က် မ​ရှိ​တဲ့​အတွ​က် http://.... ကေ​ဒါ​င်း​လု​ပ် လုပ်လို့​ မ​ရေြ​ကာ​င်း errorြ​ပ​ပါ​မ​ယ်။ အေ​ရး​မြ​ကီး​ပါ။ ကိုယ်လုပ်ထား​တဲ့ local repositories က error မ​တတ်ရ​င် အဆ​င်ြေ​ပ​ပါြ​ပီ။ Software သွ​င်းချင်ရ​င်
ဒါ​ဆိုေ​ဒါ​င်း​လုပ်လုပ်ဖို့​ URL lists ထွက်လာ​ပါ​မ​ယ်။ တစ်ခု​ရှိ​တာ​က local repo ကို သုံး​ထား​တဲ့ အတွ​က် တချို့ေ​န​ရာေ​တွ​မှာ http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main အစား file:/home/username/poolြ​ဖ​စ်ေ​နနိုင်ပါ​တ​ယ်။ ဒါ​ကို manual - http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ အစားထိုးေ​ပးြ​ပီးေ​ဒါ​င်း​လု​ပ်ေ​ပး​ရ​မှာြ​ဖစ်ပါ​မ​ယ်။ြ​ပီး​ရ​င် အရင်န​ည်း​အတို​င်း install လုပ်ရုံ​ပါ​ပဲ။
ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ Home folder ထဲ​က source folder ကိုေ​တာ့ မဖျက်ဖို့​ အေ​ရးြ​ကီး​ပါ​တ​ယ်။ Bleachbit တို့​၊ Janitor တို့​​လဲ မ​သုံး​သ​င့်​ပါ​ဘူး။ (သုံး​လဲေ​န​ရာ ဘယ်ေ​လာက်မှ မ​ပို​လာ​ပါ​ဘူး။)
ြေ​ပာြ​ပေ​ပး​တဲ့ သူ​ငယ်ချ​င်း​ကို​လဲ အထူး​ကျေး​ဇူး​တင်ပါ​တ​ယ်။
နောက်ထပ် နည်းလမ်း တစ်ခု။ ဒါကိုတော့ မစမ်းဖူးပါဘူး။ ရမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။
Last edited by g00gle; 28-11-2012 at 02:06 AM..
ကိုလင်း1z, စနိုးလေး, နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, ဟန်မိုးလွင်, မောင်သံသရာ, နိုင်သူရ, bagothar85, Ka Ka Shi, kyawminkhoung, minthike, pannuko, tu tu, waihtutpai, zo
ပို့စ် 27 ခုအတွက် 72 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Ubuntu မှာ အင်တာနက် မရှိပဲ ဆော့ဝဲ သွင်Ɵ
Offline Package တွေကို သွင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေလည်း သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
အဆင်ပြေရင် Share ပေးပါအုံး ဦးဘွန်းတုကို ကလိချင်နေတာကြာပြီ
Offline Package လည်းရှိတယ် သွင်းနည်းလေးသိရင်တော့ Default OS အဖြစ်ကို တင်ပြီး ကလိပြီ
Ka Ka Shi ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Visit Ka Ka Shi's homepage!
Find More Posts by Ka Ka Shi
Offline packages ဆိုတာက ဘယ်လိုမျိုးလဲ မသိဘူး။ အမျိုးအစားလိုက်ပြီး သွင်းပုံကွာတယ်။
exe နဲ့တူတဲ့ " .deb " file အမျိုးအစားဆို ဖိုင်တွေအားလုံးကို ဖိုဒါတစ်ခုထဲထဲ့ပြီး
နဲ့ သွင်းလို့ ရတယ်။
တစ်ခုရှိတာက " .deb " files တွေကို ဘယ်သူ ထုတ်ပေးမလဲဆိုတာပဲ။
Ubuntu ဆော့ဝဲမှာက deb files တွေက exe နဲ့ နည်းနည်းကွာတယ်။ exe လို တစ်ခုထဲ စုနေတာ မဟုတ်ပဲ ပြန့်ကျဲနေတယ်။
ဥပမာ - ဆော့ဝဲ A အတွက် .deb files (a) (b) လိုတယ်။ ဆော့ဝဲ B အတွက် .deb files (b) (c) လိုတယ်။
ဒီတော့ ဆော့ဝဲ A သွင်းထားတဲ့ စက်ကနေ ဆော့ဝဲ B အတွက် package ထုတ်ရင် အဲဒီစက်မှာ မသွင်းပဲကျန်နေတာ (c) ပဲ ရှိတဲ့အတွက် .deb file (c) ပဲ ထွက်လာလိမ့်မယ်။
ဆော့ဝဲ A ရော၊ B ရော မသွင်းတဲ့ စက်မှာကျတော့ ဆော့ဝဲ B အတွက် package ထုတ်ရင် (b) (c) ၂ ခုလုံး ထွက်တယ်။
ဒါကြောင့် (c) တစ်ခုပဲ ပါတဲ့ offline package နဲ့ ဆော့ဝဲ A မသွင်းထားတဲ့စက်မှာ သွားသွင်းရင် ပြသနာတက်ရော။
ကောင်းတာက အထက်က ပို့စ်မှာလို source update လုပ်ပြီးသွင်းတာ။
တစ်ချို့ offline package ကျတော့ အကုန် စုထားပြီးသား။ " .bin " နဲ့ ဆုံးချင်ဆုံးမယ်။ script ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ သူထုတ်တဲ့ဟာကို မူတည်ပြီး သွင်းပုံကွဲနိုင်တယ်။ Double click နှိပ် - သူ့အဆင့်တိုင်း ဆက်လုပ်သွားတာ ရှိသလို၊ Terminal ကနေ ဆော့ဝဲ ရှိတဲ့ဖိုဒါကိုဝင် (ဥပမာ - Downloads ဖိုဒါထဲဆို $ cd Downloads)
ဆိုပြီး သွင်းရတာလဲ ရှိတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုက Tar package တွေ။ Tar ကတော့ Zip file လိုမျိုး Archive ဖိုင် (ဖိုင်ချုံ့ထားတာ) တစ်မျိုးပဲ။ Tar package အများစုက software source တွေ များတယ်။ Developer တွေ၊ version နောက်ဆုံးကိုမှ သုံးချင်တဲ့သူအတွက်ပါ။ softpedia တို့က ဒေါင်းရင် Tar ဖိုင်တွေပဲ များတယ်။
Tar file တွေက Right click >> extract လုပ်ပြီး software sources ကို compile လုပ်ရတယ်။ Compile လုပ်တာက အဆင့် အရမ်းရှုပ်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုလဲ မတူပါဘူး။ ပြသနာ အမျိုးမျိုးလဲ တက်ပါတယ်။ VLC ကို compile လုပ်မယ်ဆို သူ့အတွက်လိုတဲ့ video codecs တွေ၊ compile လုပ်ဖို့ developer tool ထပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေရတယ်။ အင်တာနက် မရှိရင် အဆင်မပြေဖို့များတယ်။ Developer အတွက် ဘာတွေ လိုလဲဆိုပြီး ရေးထားတာ အရင်ဖတ်ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် google မှာ ဘယ်လို compile လုပ်မလဲ အရင်ရှာရတယ်။ မဟုတ်ရင် အချိန်အရမ်းကုန်တယ်။
dependencies စုံသွားရင် compile လုပ်တဲ့နည်းက
ဒါပါပဲ။ ./configure အဆင့်မှာ ပြသနာအများကြီး တက်နိုင်ပါတယ်။
Ubuntu 12.04 32 bit အတွက်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် Offline deb files တွေ ထုတ်ပေးလို့ ရတယ်။ လိုချင်တဲ့ ဆော့ဝဲသာ တောင်းထားလိုက်ပါ။ http://www.myanmarfamily.org/forum/s...5&postcount=44 လင့်မှာလဲ နည်းနည်းရှိတယ်။
Ubuntu Myanmar Locoteam မှာလဲ ဆော့ဝဲပါတဲ့ အခွေထုတ်ထားတာ ရှိတယ်။ Facebook မှာ ရှာကြည့်ပါ။ အင်တာနက်ကလဲ ဒေါင်းလို့ ရတယ်။ ရန်ကုန်၊ မန်းဒလေး မှာဆို အခွေသွားတောင်းလို့ ရတယ်။ ဒေါင်းရ သက်သာတာပေါ့။
မျိုးဟန်ထက်, မောင်သံသရာ, Ka Ka Shi, minthike, tu tu, waihtutpai, zo
wireless driver သွင်းပုံလေးသိချင်ပါတယ်။ offline သွင်းချင်တာပါ။
Find More Posts by ဒိ၄၇၁
20-08-2012, 09:33 PM
terminal....ကဘယ်နားမှာကြည့်ရမလဲ ဘယ်လိုသွားရမလဲ... ကျနော်ကစလေ့လာနေသူမို့ပါ
Originally Posted by vipfamily
Ubuntu မှာဆိုယင် ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ Terminal ထဲကို ဝင်ဖို့ နေရာစုံကို ပြောပေးထားပါတယ်... Dash ကနေ Terminal လို့ ရိုက်ရှာချင်ရှာ ၊ ဒါမှမဟုတ် ကီးဘုတ်ကနေ Shortcut - Ctrl + Alt + T ဆိုယင်လည်း ရပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ...
Last edited by bagothar85; 21-08-2012 at 09:15 AM..